Otu esi etinye AnyDesk na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
September 7, 2021 by Jọshụa James
Kwado Ebe nchekwa AnyDesk
Ebe nchekwa mbubata
Otu esi eji AnyDesk
Otu esi ewepu AnyDesk
AnyDesk bụ ngwanrọ desktọpụ dịpụrụ adịpụ nke na-enye anyị ohere ijikọ na kọmpụta nke dịpụrụ adịpụ ma ọtụtụ nde mmadụ na-eji ya gburugburu ụwa. Ọ bụ sọftụwia cross-platform na-enye ohere dịpụrụ adịpụ n'elu ikpo okwu na PC dị iche iche na ngwaọrụ ndị ọzọ na-anabata ya. Ọ na-enye ohere dịpụrụ adịpụ, ịnyefe faịlụ, atụmatụ VPN. Ọ na-enye ndị ọkachamara IT ohere nchekwa na ntụkwasị obi.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi eme tinye ụdị AnyDesk kachasị ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 gị.
Nzọụkwụ mbụ bụ imeghe ọdụ Ubuntu gị (Ctrl+ALT+T), wee detuo ma mado iwu a ka ibubata ihe igodo GPG, nke achọrọ iji nyochaa izi ezi nke ngwugwu ndị ahụ site na ebe nchekwa:
Mwepụta ihe atụ ma ọ bụrụ na ebubata nke ọma:
Nzọụkwụ ọzọ mgbe ibubata igodo GPG bụ ibubata ebe nchekwa ahụ n'onwe ya. Site na ebe a, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịwụnye AnyDesk kamakwa nweta mmelite n'ọdịnihu. Iji bubata ndekọ aha, mee ihe ndị a echo iwu na ọdụ Ubuntu gị:
Ozugbo ịmechara ebe nchekwa AnyDesk, ị ga-emelite ndepụta ngwugwu gị ugbu a iji gosipụta mgbanwe ndị ahụ site na iji iwu mmelite dabara adaba:
Na-esote, wụnye AnyDesk site na iji iwu a:
Ụdị Y, mgbe ahụ pịa igodo tinye iji wuchaa echichi.
Nyochaa nrụnye na AnyDesk wuo site na itinye iwu a:
Dị ka ị na-ahụ, AnyDesk arụnyere nke ọma ma bụrụ ụdị 6.1.1 n'oge ịmepụta nkuzi a.
Na nrụnye zuru oke, ị nwere ike ịgba AnyDesk n'ụzọ dị iche iche. Nke mbụ, ka ị nọ na ọdụ Ubuntu, ị nwere ike iji iwu na-esonụ:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ anydesk iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Agbanyeghị, nke a adịghị mma, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na desktọpụ Debian gị meghee ụzọ ahụ: Ihe omume> Gosi ngwa> AnyDesk. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ imepe AnyDesk, ị ga-ahụ windo na-esonụ.
Iji AnyDesk bụ akụkụ kwụ ọtọ na nke yiri ya na TeamViewer ma ọ bụrụ na i jiri ngwanro a na mbụ. A na-enye gị NJ njikọ, ya na kọmpụta na-abụghị nke ya.
Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ ijikọ site na kọmputa A na kọmputa B. Need ga-achọ kọmputa A njikọ id dị na windo AnyDesk sessions na akuku aka ekpe elu, nke bụ Nke a oche ID 335 649 117.
Na kọmputa nke abụọ, aha ya bụ kọmputa B, jiri njikọ njikọ nke kọmputa A nke na nkuzi ikpe bụ 335 649 117 na Ogige Desktọpụ, na pịa njikọ.
Laghachi kọmputa A, nke na-anata njikọ ahụ, ndụmọdụ mpio ọhụrụ nke arịrịọ nnọkọ njikọ ga-apụta. Pịa nnabata iji jikọọ nnọkọ AnyDesk n'etiti kọmputa.
Na-esote, ọ bụrụ na ihe niile arụ ọrụ nke ọma, a ga-ejikọta gị na nnọkọ AnyDesk, ọ bụ ya. Ị nwere ike ịnye ụfọdụ ikike ma hazie ihe ole na ole maka AnyDesk na ntọala, mana nke a bụ isi nke njikọ.
Ọmụmaatụ nke nnọkọ:
Iji wepu ngwanrọ AnyDesk na sistemụ Ubuntu gị, mee iwu ndị a na ọdụ gị:
Ụdị Y, mgbe ahụ pịa igodo tinye ka ịga n'ihu na iwepụ ya. Mara, a ga-ewepụkwa ndabere niile nke na-adịkwaghị mkpa.
Mgbe ahụ maka iwepụ kpamkpam, hichapụ ebe nchekwa ahụ.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye AnyDesk na otu esi ejikọta na kọmputa ma ọ bụ ihe nkesa ọzọ dịpụrụ adịpụ na ntọala nke Ubuntu 20.04. N'ozuzu, AnyDesk na-ejikọta ngwa ngwa, kwụsie ike, ma nwee arụmọrụ ka mma karịa TeamViewer, ọbụlagodi na obere bandwit. AnyDesk na-enye ihe nleba anya nke onwe, nke na-edobe data niile n'ime nzukọ gị ma bụrụkwa nhọrọ maka ndị na-achọ ụzọ ọzọ.